प्राडा. लोकराज बराल | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय प्राडा. लोकराज बराल
लोकराज बराल सन् १९४२ मा झापाको इरौटारमा जन्मिएका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरका साथै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्लीबाट विद्यावारिधी गरेका छन् । करीब ३६ वर्ष विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका बरालले १२ वर्ष राजनीतिशास्त्र विभागको प्रमुख भएर काम गरेका थिए । १५ महीना भारतका लागि नेपालको राजदूत भएर काम गरेका उनी हाल नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष छन् ।
परराष्ट्र नीति र सुधारको बाटो
नेपालको वर्तमान कूटनीतिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । नीति निर्माणका लागि गहन अध्ययन र चिन्तन कहिल्यै नभएकाले यसमा उल्लेख्य प्रगति नभएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि परराष्ट्र, आर्थिक, सामाजिक नीतिमा गहन चिन्तन र अध्ययन होलान् भन्ने आशा गरिएको थियो । यद्यपि, आर्थिक, सामाजिक नीतिमा बेलाबेलामा समय सान्दर्भिक नीति केही मात्रामा छन् । तर, नयाँ सन्दर्भ र परिवेशमा नेपालको परराष्ट्रनीति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भने ठोस पहल अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षालगायतका कुरामा नेपालको हितमा छ/छैन भन्न पनि गहन अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त सन्धिले स्वतन्त्र नेपालको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएको छ भन्ने कुरा बेला-बेलामा उठ्ने गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म सो सन्धिलाई राजनीतिक दलहरुले खाली एउटा नाराका रुपमा मात्र उठाएका छन् । यसबारे गहन छलफल गर्ने कुरामा उनीहरुको चासो गएको छैन । त्यतिमात्र होइन, उक्त सन्धिले नेपाललाई कति फाइदा वा नोक्सान पुर्याएको छ भन्ने कुरामा पनि दलहरुको ध्यान जान सकेको छैन ।
अहिले खुला सिमानका कारण थुप्रै नेपाली भारतमा र थुप्रै भारतीय नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुको भोलिको अवस्थाबारे भारत पक्षबाट होस् या नेपाल पक्षबाट कूटनीतिक पहल भएको छैन । नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा नै चिन्तन भएको छैन । नेताहरुले भाषण गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । नेपालका सबै राजनीतिक दलमा छिमेकी मुलुकसँग भएका विभिन्न सन्धि-सम्झौतालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । मन नपर्दा आलोचना गर्ने र मन पर्दा उचित देख्ने गलत संस्कार दलका नेतामा विद्यमान छ । मुलुकको हितमा नसोचेर दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थका रुपमा सोच्ने यो प्रवृत्ति कसैको हितमा हुन सक्दैन । सरकार परिवर्तनसँगै छिमेकी मुलकसँग भएका सन्धि-सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने वा खारेजी गर्ने भन्ने बहस उठ्छन् । तर, पछि ती त्यत्तिकै सेलाएर जान्छन् । त्यतिमात्र होइन, निर्णयभएका सन्धि-सम्झौताहरुसमेत नेपालमा लागू हुन सकेका छैनन् । महाकाली सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने उक्त सन्धिलाई तत्कालीन संसद्को दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो । तर, त्यो अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन ।
जनता बलियो हुँदा मुलुकको मान बढ्ने हुन्छ भन्ने सोच राजनीतिक दललमा विकास हुन नसकेका कारण थप जटिलता उत्पन्न भएका छन् । मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र नयाँ संविधान बनाउने कुरामा कुनै पनि राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा अहिले एउटै राजनीतिक पार्टीलेे बर्चस्व छैन । पार्टीले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि दलभित्रकै खिचातानीले मुलुकको अवस्था दिनदिनै दयनीय बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएका छन् । आफू नै बलियो हुन नसक्ने हो भने स्वाभाविक रुपमा परराष्ट्र नीति पनि बलियो हुन सक्दैन । न्यूनतम संस्कारको विकास नभई राजनीतिक विकास सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि राजनीति ठीक ठाउँमा आउनुपर्छ । हामी राजनीतिलाई नै प्रधानता दिन्छौं । तर, राजनीति नै सही ठाउँमा नभएपछि अन्य कुरा राम्रो सुल्टिने कुरा हुँदैन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, देशको विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउनेलगायत कुरामा राजनीतिक अठोट नै प्रमुख हुन्छ । राजनीतिक दलमा सबैभन्दा पहिला कुन बाटोमा लाग्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा खाडी र अन्य मुलुकमा दैनिक हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा नेपाली युवा बाहिरिने गर्छन् । सरकार उनीहरुकै कारण आएको विप्रेषण र विदेशी अनुदानलाई प्रमुख आधार मानेर वार्षिक बजेटको तर्जुमा गर्ने गर्छ । तर, भविष्यमा कामबाट फर्किने नेपाली आएपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाउनतर्फराज्यले चासो लिनैपर्छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने समुन्नत नेपाल परिकल्पनामा मात्र सीमित नरहला भन्न सकिन्न । विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द हुने क्रम दिनहुँ बढेको छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक कलहका कारण एकपछि अर्को समस्या दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूलाठूला परराष्ट्र नीतिका कुरा गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । आफ्नो घर बलियो नभई आर्थिक, सामाजिक विकासका कुरा गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।
निष्कर्ष यही अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ वा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ र सबै दल मिलेर साझा सहमतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, गरीबी निवारण, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा सहमति कायम हुनुपर्छ । देश विकास, जनहित र परराष्ट्रका कुरामा साझा एजेण्डा तय गरेर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अहिलेसम्म समयअनुसार परिमार्जन र परिष्कृत बनाएर समयसापेक्ष पार्ने कुरामा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आगामी दिनमा नेपालको सम्बन्ध छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग र अन्य मुलुकसँग कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति बनाउने कुरामा समेत बहस चलाउन आवश्यक छ । तर, आजका सन्दर्भमा प्रमुख कुरा भनेको नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नै हो । यो गतिशील समाजमा जातीयता, धर्म, संस्कृतिजस्ता कुरामा नयाँ-नयाँ जटिलता दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । संविधान निर्माण भएपछि मात्र यी पक्षमा ध्यान दिँदै परराष्ट्र नीतिसमेत बनाउन सकिन्छ । आफ्नै घर बलियो पार्न राजनीतिक स्थिरता र सबै पक्षको सहमति चाहिन्छ र यसैका जगमा समय र परिस्थिति सुहाउँदो परराष्ट्र बन्न सक्छ ।